Binance Phone Number𝟭【𝟖𝟒𝟒¥=𝟗𝟎𝟕%^𝟎𝟓𝟖𝟑】Customer Number services of a telecom - Emu Articles
Home/Business/Binance Phone Number𝟭【𝟖𝟒𝟒¥=𝟗𝟎𝟕%^𝟎𝟓𝟖𝟑】Customer Number services of a telecom
BusinessCommunicationsComputers and TechnologyFashionNews and SocietyServicesUncategorized
xomisa5413July 9, 2020
Binance Technical Support Nhamba Yefoni Imwe yeiyo inonyanya kukurumbira Southwestern Bell Nhamba kambani iri iyo inotsigirwa yeYOHOO inotungamirwa muTexas, United States .. Yahoo ndeimwe yeanodiwa email sevhisi pasi rese uye sevhisi iyi inobatanidza mamirioni avanhu pamwe nayo . Nekuda kweichi chikonzero kune vazhinji nhamba yevashandisi vari kuwana matambudziko akasiyana mazuva ese. Zvekutaura chero munhu arikufona anonzi anofanirwa kuve mumwe weakanakisa sosi uye nekudaro iwe unofanirwa kufonera yahoo mutengi webasa refoni kana uchinge watarisana nematambudziko. Munguva ino yatiri kuona kuri kuwedzera kudikanwa kweiyo Apple chigadzirwa mumusika wepasi rese uye saka kambani yakamiririra akawanda maapplication eemail service anotsigirwa neApple uye iPad nezvimwe zvinotevera nyaya iriko isu isu tinokwanisa kwazvo kupa mhinduro yakanyanya.
• Unogona kudzidza maitiro ekugadzirira e-email email account nyowani chero email email saOrview, Yahoo uye apple mail.
• Mushandisi anogona kudzidza kukwira-kuganhurirwa kune itsva Yahoo Yahoo peji reruwa.
• Kugadziridzwa kwemaimeri server server.
• Nhanho dziri nyore dzeanonyanyo kubatsirwa rubatsiro seye password kudzoreredza.
• Mutengi anogona Setup yeasina waya network uye zvimwe zvakawanda.
• Nyaya dzakanangana nekutumira uye kugamuchira maimeri uye mameseji.
Nongedzo dzaunosarudza iyo Email vatengi sevhisi nhamba:
• Vakakwirira vanokwanisa, vakazvitsaurira, vakavimbika uye vane ruzivo ruzivo.
• 24 Nomwe na7 kutenderera wachi yekure rutsigiro.
• Yakachengetedzwa kure kusvika pamwe chete nekuvimbiswa kwekuchengetedza kwedata.
• Vashandisi vanobatana nechikwata chevashandi vakazvipira.
• Kukurumidza kuwanikwa kwemasevhisi uye mhinduro dzepapo.
• Result yakatarisana masevhisi uye akavimbika masevhisi.
Binance Mutengi rutsigiro pamusoro pefoni:
Zvese zvatinoziva izvo zvigadzirwa uye masevhisi ekambani yefoni inonyatsotungamira kubatanidza tekinoroji uye tambo kana paine zvinhu zvakakanganisika iwe unogona kubata nekubata nekuita yahoo technical rutsigiro nhamba yefoni chero nguva kutenderera nguva. Kune iyo yakakodzera email email tsigiro yevatengi yeYahoo mutengi uwane kugutsikana kukuru pasina zvichemo. Kana kukurumidza kwako kuchiramba paunenge uchitumira uye kutumira mameseji ipapo kurumidza kufonera Yahoo tech rubatsiro. Nekuona kuri kuwedzera kudikanwa kwekambani yakamiririrwa kufona kwemahara kuburikidza nehuwandu hwerusununguko. Iyi nhamba inobatsira chaizvo nekuti vanhu vanogona kupindirana nematekitori akakodzera pasina muripo.
Mamiriro e smtp epaYahoo ndeaya:
• Sarudza sarudzo “marongero” ayo ari mune zvikamu zvidimbu zve “APPS”.
• Mukati me “marongero” panowanikwa sarudzo inonzi “maakaunti”. Ese ma maneja manejimendi anoitwa nekushandisa iyi sarudzo.
• Mune ichi sarudza sarudzo “wedzera account”.
• Inotevera sarudza ’email’.
• Pasi peemail, sarudza ‘vamwe vanopa’.
• Inotevera iwe uchafanirwa kuisa yako yehoo username kana email email uye password.
• Mushure mekupinza yako login dhata, sarudza sarudzo yekumanikidza kumisa yako Binance account.
• Mune zvigadziriso zvemanyorerwo, isa sevha mhando sePOP3.
• Nyora muzita rako rekushandisa uye password
• Tevere, muPOP3 server shamba, mhando – pop.att.yahoo.com
• Icho chiteshi chichava neicho kukosha chakamiswa kune 995.
Tevere taizofanira kugadzirisa mameseji e smtp ..
• MuSM server server munda, nyora mukati – smtp.att.yahoo.com
• Chiteshi chichava neicho kukosha chakatarwa kusvika 465.
• Isa yako zita rezita uye password zvakare.
• Pakupedzisira tinya ok kupedzisa kugadzirira bhuku remanyorero.
Yako email account inofanirwa kunge iri kumusoro uye ichimhanya. Nekudaro kana yako email account isiri kushanda, iwe unofanirwa kubata iyo yahoo yevatengi sevhisi. Mumiriri wavo mutengi achashanda newe pakutsvaga mhinduro yekukurumidza padambudziko rako. Iyo yahoo tekinoroji rutsigiro inonyanya kutsigira uye inobatsira mukugadzirisa matambudziko ako mukati menguva pfupi pfupi nguva kuti usatarisana nekunetseka nekuda kwayo.
Nzira yekubvisa sei password kudzoreredza nyaya Paunenge uchishandisa Yahoo Akaunti
Nhamba yemakambani aripo anopa akasiyana eemail services kune vashandisi.Iri ibasa remushandisi kusarudza rakavimbika email sevhisi. Yahoo inozivikanwa kuti ipe dambudziko remahara sevhisi, kuti mushandisi anogona kuwana zvakanakisa kubva pazviri.
Izvo hazvina basa kana iyo email sevhisi iri kuita inononoka kana kuwana dambudziko panguva yekuwedzera siginecha, zvingave nyore kwauri kuti ubatanidze pamwe nevatengi chengetedza timu nerubatsiro rweYahoo rutsigiro peji kana nharaunda, maforamu.Ipo kune vezvenhau venhau. mapeji ekubatsira kukupa kukurumidza uye yakavimbika solution.Inyanzvi ine ruzivo uye inonyatsokwanisa timu iripo iyo inogona kusvika 24 / 7.Accounters vanobata vanogona kuwana mhinduro dzekukurumidza kugadzirisa matambudziko akaoma eemail. Iko kune toll yemahara nhamba iyo inogona kuvezwa chero nguva.
Rondedzero yezvinyorwa yakagadziriswa neboka revanoona mainjiniya.Hara, iwe unogona kuwana rubatsiro kune imwe: –
Maitiro Ekuita Yahoo password Reet?
• Mumwe nemumwe anofanira kushanyira iyo Yahoo “Akakanganwa password” peji.
• Iko kunofanirwa kusarudza “password.”
• Mushandisi anofanira kupinda kuzere Binance kero ine zita rekupedzisira.
• Dzvanya sarudzo ye “Ramba” uye nekushandisa yekudonha-pasi menyu, sarudza sarudzo ye “Ini ndichapindura mibvunzo yangu yekuchengetedza.”
• Zvisinei, pane ne
Know all about types of Quality Audits